Dhaliye.com – Ligue 1
Ligue 1	»
PSG oo rabta Rooney iyo Fabregas
Khaliil May 24, 2013
Waxaa Akhrisatay :627Kooxda Paris Saint Germain ay rabto inay wado mashruuceeda ay ku rabto inay keento ciyaartoy waawayn, hadii u jooga tababare Carlo Ancelotti iyo hadii kaleba. Jariirada Sport ayaa sheegaysa in kooxda PSGRead More »
Ibrahimovic oo qiray: wan u darsaday Italy, Ancelotti-na wuu ka fiican yahay Mourinho
Khaliil May 23, 2013
Waxaa Akhrisatay :371Weeraryahanka reer Swedan ee Zlatan Ibrahimovic ayaa qiray inuu u darsaday jawigii kubada dalka Italy, kaaso sheegay in laga yaabo inuu dib ugu laabto dhulalka dalkaasi. Ibra mar uu ka hadlay arinkanRead More »
Arsenal oo goor hore suuqa gashay, ciyaartoygii koowaad ayaa caafimaadka maraya
Waxaa Akhrisatay :1915 Waxa la filaya inuu saacadaha soo socda maro caafimaadka wiilka da’da yar ee weerarka uga ciyaara kooxda Auxerre “Yaya Sanogo”, si uu u dhamaystiro wareegiisa kooxda Arsenal. Shabakada Sky Sport ayaaRead More »
Tababare Carlo Ancelotti oo ka tagay tababarka kooxda PSG, kaaso u dhaw inuu ku biiro kooxda Real
Waxaa Akhrisatay :238 Tababarahii hore ee kooxda Ac Milan imikana macalinka u ah kooxda Paris Saint Germain ee Carlo Ancelotti ayaa go’aansaday inuu tago kooxdiisan PSG, siday ku sheegtay Chanel-ka Bein Sport ee kasooRead More »
RASMI: David Beckham oo shaaciyay inuu ka fadhiisanaya kubada cagta.
Khaliil May 16, 2013
Waxaa Akhrisatay :208 Waxa uu shaaca ka qaaday kabtankii hore ee qaranka England David Beckham ee imika u ciyaara kooxda Paris Saint Germain inuu ka fadhiisanayo kubada cagta dhamaadka xilli ciyaareedkan. Beckham ayaa sooRead More »
Ancelotti: PSG waxa jira 3 ciyaartoy oon la taaban karin
Waxaa Akhrisatay :762 Waxa uu ka hadlay tababaraha reer Italy ee kooxda Paris Saint Germain “Carlo Ancelotti” siduu u arko ciyaartoyda ka tagaysa kooxda hadi uu sii joogo kooxda. Waxa uu sheegay saxaafada dalkaRead More »
Waxaa Akhrisatay :1897 Waxa uu ka dalbaday tababaraha kooxda Barcelona ee Tito Villanova maamulka kooxdaasi inay soo iibiyaan 3 ciyaartoy xagaaga soo socda, si ay kooxda uga caawiyaan inay sanadka dambe qaadaan horyaalka ChampionsRead More »
Tafaasiil ku saabsan heshiiska Verratti iyo Real Madrid
Khaliil May 7, 2013
Waxaa Akhrisatay :694 Kooxda Real Madrid ee dalka Spain ayaa qarka u saaran inay la wareegan xidiga da’da yar ee kooxda Paris Saint Germain ee Marco Verrati xagaaga soo socda. Waxa uu shaaca kaRead More »
Zlatan Ibrahimovic oo isu bandhigay Real Madrid!
Khaliil May 4, 2013
Waxaa Akhrisatay :674 Kooxda Real Madrid ayaa rabta inay soo iibsato weeraryahan heer caalami ah sida Cavani, Suarez, Aguero, Lewandoski iyo Neymar. Waxay sheegtayna jariirada elconfidencial in weeraryahanka Zlatan Ibrahimovic uu ka dalbaday Carlo AncelottiRead More »
Arsenal oo ilbaab kasta garaaceysa, si ay sanadka dambe isku soo xoojiso
Mahad May 3, 2013
Waxaa Akhrisatay :1037Kooxda Arsenal ayaa waxaa u muuqataa mid ay ka go’an tahay inay xagaagaan ay keentay ciyaartoy tayo wanaagsan leh, si ay koobab ugu soo hoyaan Garoonka Fly Emirates. Tababaraha Arsenal Arsene WengerRead More »